म कसम खान्छु! वा मैले गर्नु पर्छ? | Martech Zone
म कसम खान्छु! वा मैले गर्नु पर्छ?
शनिबार, जनवरी 27, 2007 मङ्गलबार, अक्टोबर 4, 2011 Douglas Karr
पाउला मोनीले हालसालै लेखी प्रविष्टि ब्लगर्स Cussing बारेमा। तपाईंको विचारमा म उत्सुक छु:
ईमान्दार हुनका लागि, त्यहाँ केहि ब्लगहरू छन् जुन मैले भ्रमण गरेको थिएँ जहाँ मँ पढ्छु ... ती सबै हास्यपूर्ण हुन्छन्। म ब्लगमा टाँसिन संघर्ष गर्छु जुन कुनै स्पष्ट कारणको लागि cuss वा कसम खाने छैन, तथापि। यदि यो क्रोधको कारणले भनिएको छ भने, म निश्चित रूपमा दोस्रो भ्रमणको लागि आउँदिन।
तीन कारणहरू जुन तपाईले आफ्नो ब्लगमा चिन्ता गर्नुहुन्न:
नेटमा तपाइँका शब्दहरू तपाइँ भन्दा बढि लामो हुन सक्छ। यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ यो cussing को लागि सम्झना गरीएको छ।
त्यहाँ धेरै शब्दहरू छन् जुन तपाईंले सायद कहिल्यै सुन्नु भएको छैन ... केहि नयाँ शब्दहरू प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्।
Cussing कसैले अपमान गर्न सक्छ, Cussing कसैलाई अपमान गर्दैन।
आफ्नो विचार साझा गर्नुहोस्। म केवल एक बन्ने छु? curmudgeon? नोट: कुनै cussing!
पाउला नील मुनी
जनवरी 27, 2007 10:38 बजे
यो इफिन राम्रो छ! बस मजाक गर्दै, डगलस।
जनवरी 28, 2007 1:02 बजे
मैले यो लिङ्क फेला पारे Lifehacker आज ती मानिसहरूका लागि केहि शब्दावलीको आवश्यकता छ:
जनवरी 28, 2007 1:17 बजे
मैले पछ्याउने ब्लगहरू मध्ये एउटामा ठूलो मात्रामा शपथ ग्रहण समावेश छ। उसको उद्योगले लिइरहेको दिशामा व्यक्तिलाई स्पष्ट रूपमा चोट लागेको छ, र यो मात्रै उसको भावनाहरू व्यक्त गर्न सकिन्छ जस्तो देखिन्छ। उहाँले गैर-उद्योग सम्बन्धित पदहरूमा कसम खाएको देखिँदैन। उहाँको भाषा उपयुक्त छ जस्तो मलाई लाग्दैन, उहाँको भावनामा चोट लागेको स्पष्ट छ, र म उसको भाषाको छनौटबाट यो उठाउन सक्छु।
म मेरो ब्लगमा कसम खाउँदिन। म चाहन्छु कि मेरो सामग्रीमा दौडनेहरूले सामग्रीमा फोकस गरोस्, यसलाई डेलिभर गर्न प्रयोग गरिएको भाषामा होइन।
जनवरी 28, 2007 4:43 बजे
कस्स गर्नु मेरो लागि बन्द हो, र मैले धेरै भन्दा धेरै महिलाहरूले गाली गर्ने शब्द वा शब्दहरू प्रयोग गरिरहेको देखिरहेको छु अन्यथा तपाईंले मेरो दिनमा साबुनले भरिएको मुख पाउनुहुनेछ। उनीहरूलाई लाग्छ कि यसले उनीहरूलाई सुन्दर देखाउँछ, वा उनीहरूले वास्तवमा मानिसहरूले के सोच्छन् भनेर चिन्ता नगर्न पर्याप्त स्वतन्त्र महसुस गर्नुपर्छ। धेरै मानिसहरूले तपाईंलाई बताउँदैनन्; तिनीहरू केवल तपाईंको ब्लगबाट टाढा छन्! यदि कसैले आफ्नो ब्लगमा श्राप शब्दहरू प्रयोग गर्नबाट रोक्न सक्दैन भने, तिनीहरूले ब्लग गर्न आवश्यक पर्दैन। उल्लेख गरिएझैं, यो हामीले सोच्न चाहेको भन्दा लामो समयको लागि खोज इन्जिनहरूमा हुनेछ!
जनवरी 28, 2007 7:04 बजे
मलाई संयमतामा कसम खानु ठीक छ जस्तो लाग्छ। तर यदि प्रत्येक अन्य पोष्ट कसम शब्दहरू सहितको रन्ट हो भने, म पढ्न छोड्छु।
यो केवल आवश्यक छैन।
जनवरी 29, 2007 2:00 बजे
छलफल सुरु गर्नुभएकोमा धन्यवाद, डग। मलाई गालीगलौज सुन्ने वा पढ्ने वास्ता छैन, र म यो आफैं गर्दिन। निस्सन्देह, रिसमा पनि, आफूलाई अभिव्यक्त गर्ने धेरै प्रचण्ड तरिकाहरू छन्। यदि म एक ब्लगर पढ्दै छु जसले यो एक पटक गर्छ, यसले मलाई फिर्ता आउनबाट रोक्दैन। यदि यो बानी बन्छ भने, म त्यो साइटबाट टाढा रहनेछु।
जनवरी 29, 2007 2:33 बजे
व्यक्तिगत रूपमा मलाई लाग्छ कि कसम शब्दहरू मात्र विशेष प्रभाव बोक्ने शब्दहरू हुन्। उचित रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्, अनावश्यक रूपमा होइन।
जनवरी 29, 2007 2:52 बजे
स्टर्लिंग, मलाई लाग्छ विशेष प्रभावको लागि कसम शब्दहरू प्रयोग गर्दा हामीले हाम्रो जिब्रो वा सायद अङ्ग्रेजी भाषामा कत्ति कम कमान्ड छ भनेर देखाउँछ। मेरो लागि, सराप वा कसम खाने कुनै 'उचित' तरिका छैन। मानिसहरूले तिनीहरूको आफ्नै चरित्रलाई चोट पुर्‍याउँदा, हरेक दिन शब्दहरू (तिनीहरू युवाहरूको लागि त्यसरी नै बनिरहेका छन्) जस्ता केही शब्दहरू प्रयोग गर्छन् भन्ने सुन्दा मलाई विचलित हुन्छ।
जनवरी 29, 2007 3:00 बजे
र यी शब्दहरू किन अपमानजनक छन्? किनभने तिनीहरू स्याक्सन वा सेल्टिक भाषाहरूबाट व्युत्पन्न हुन्छन्। यदि मैले "मैथुन!" वा "दिसा!" कोही पनि रिसाउँदैनन्। अन्तमा, यो केवल एक जातीय पूर्वाग्रह हो जुन एक सहस्राब्दीको लागि कायम गरिएको छ।
जनवरी 30, 2007 4:09 बजे
म अवसर मा cuss, म यो मेरो ब्लग मा गर्न वास्ता छैन र किनारा वरिपरि एक macho ruff लागि गरीब केटा, म धेरै कसम खान्दिन। म भर्खरै बाल्टिमोरको एउटा टेभर्नमा थिएँ र2महिलाहरूfशब्दहरू र mf शब्दहरू बोल्दै थिए त्यसैले म रिसाएको थिएँ। मैले कमेन्ट गरिन तर मलाई चित्त बुझ्यो । मैले पाउलाको बुद्धिमत्ता र इमानदारीलाई प्रश्नै नगरेको पाएको छु। यदि पाउलाले यो सही छैन भने, त्यहाँ तपाईंसँग छ
जनवरी 30, 2007 4:21 बजे
जेडी, मेरो श्रीमान् भन्छन्, जब उसले एउटी महिलालाई यस्तो कुरा गरेको सुन्छ, यसले उनको आवाज वाह…। यो मसँग फोहोरी कुरा हो, र तपाईंले यो गर्नुपर्दैन। तर, यस्तो देखिन्छ कि यो 'प्रवृति' अहिले धेरैको बीचमा छ, र मलाई लाग्दैन कि यसले उनीहरूलाई थोरै मद्दत गर्दछ।
जनवरी 31, 2007 5:36 बजे
बारब, तपाईको लोग्ने बुद्धिमानी हुनुहुन्छ र म सहमत छु।
जनवरी 30, 2007 4:36 बजे
म सहमत छु कि 99% समय, श्राप पूर्णतया अनावश्यक छ। तथापि, त्यहाँ केहि उदाहरणहरू छन् जब यो साँच्चै सबै भन्दा राम्रो तरिका हो व्यक्त गर्न को लागी तपाइँ केहि बारे कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ। व्यक्तिगत रूपमा, म ब्लग पोष्टमा कहिल्यै सरापेको सम्झन सक्दिन, तर म यसलाई पनि अस्वीकार गर्दिन।